वामदेवका बाइस अवतार : कसको उद्धार – कसमाथि प्रहार ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
वामदेवका बाइस अवतार : कसको उद्धार – कसमाथि प्रहार !
नेकपाका कतिपयको भनाइ छ वामदेव आफना नेतालाई खेलाउन खप्पिस छन तर घटनाहरुले चाहिँँ के देखाउछन भने वामदेवलाई नेताहरुले खेलाउँदै छन् ।
केही पहिले राष्ट्रियसभाको नाथे सदस्यपद नलिने भनी चर्चामा आएका राजनीतिमा एउटा प्रतिकपात्रका रुपमा चिनिने नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पछिल्लो समय राष्ट्रियसभाको त्यही नाथे सदस्यपद दिइएन भने आकासै खस्नेगरी प्रस्तुत भए । आफू प्रधानमन्त्री हुनकै लागि यो सांसरमा आएको जस्तो ठान्ने उनी एउटा स्वाभाविक समय पर्खिन नसक्तदा आफैले पनि धेरै दुखपाए, जिस्क्याइए र अरु कार्यकर्तालाईपनि तनावमा पारे । नेपालको राजनीतिमा एउटा चुनाव हारेपछि लगत्तै भोलिपल्ट देखि जितेकाहरुको ठाउँ खाली गराउन लाउने, त्योपनि २२ –२५ ठाउमै हुनेगरी, नेता गौतम पहिलोपात्र होलान । यी सबै प्रधानमन्त्री बन्ने नाममा भए र त्यही प्रधानमन्त्री पदबाट चाहिँ उनी झनझन टाढिदै गए ।
प्रधानमन्त्रीका नाममा पराजय
गौतम बर्दियाबाट २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित हुनुको प्रमुख कारण थियो उनले आफुलाई यो निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्नु । एउटा नेताले आफुलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मान्नु अस्वाभाविक होइन । तर उनको प्रस्तुतती नै त्यस्तो भएर हो कि उनी त्यसकालागि स्वीकृत भएनन । त्यसबेलाका समाचार विवरण र अनुसन्धानहरुले त्यसै भन्छन । उनी आफैले पनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएकाका वरीपरीबाट आफुलाई हराइएको भन्ने त्यो पराजयपछिको लामो समयसम्म वताइरहेका थिए ।
गौतम एमाले माओवादीलाई चुनावी गठवन्धनमा लाने प्रमुखपात्र मानिन्छन । त्यो गठवन्धनमा उनको निर्वाचनक्षेत्र बर्दिया एकमा यी दुइदल मिल्दा नेपाली कांग्रेसको भन्दा डवलमतबढी थियो स्थानीय निर्वाचनमा तर जित्यो नेपाली कांग्रेसले गौतमकोभन्दा आठ सय बढी मतले । स्थानीय निर्वाचनमा २९ हजारमत बढी देखिएको अवस्थामा त्यो गठवन्धन बनाउने पात्रका नाममा जुन मत आयो, गौतमका लागि यो स्वीकार्य भएन तर नमान्ने धर पनि थिएन । २९ हजारबढी मतभएको ठाउमा ७ सयमत कमले हार्नुभनेको सामान्य होइन पनि ।
त्यसबेला निर्वाचन परिणाम आउदा गौतमलाइमात्र होइन अरुलाइपनि आश्चर्यमा पारेको थियो । त्यसबेलाको एउटा समाचार – ‘एमाले उपाध्यक्ष तथा वाम गठबन्धनका सूत्राधार वामदेव गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजीत भएपछि एमाले पंक्तिभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बर्दिया १ का चार स्थानीय तहमा वाम गठबन्धनले ल्याएको मत नेपाली कांग्रेसको भन्दा २९ हजार ६ सय बढी हुादाहुँदै गौतम ७ सय ५३ मतले कसरी पराजीत हुन पुगे भन्ने जिज्ञासा देशभरका एमाले नेता कार्यकर्ताले राखिरहेका छन् ।
पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनको कुनै पनि जिम्मेवारी नदिनु वामदेव पराजयको मुख्य कारण भएको बर्दियाका एमाले कार्यकर्ता बताउँछन् । चुनावी सांगठनिक संरचना नै हारको मुख्य कारण मानिएको छ । वामदेवले आफूपछि छोरा हरिसदेव गौतमलाई बर्दियामा स्थापित गराउने प्रयासलाई पनि हारको कारण मानिन्छ । श्रीमती तुलसा थापालाई समानुपातिकमा राख्नु, मनमोहन अधिकारीले बृद्धभत्ता दिन मानेका थिएनन् मैले दिएको हुँ भन्ने भाषण गर्नुलाई पनि एमालेले रुचाएनन् । वाम गठबन्धन मैले बनाएको हुँ जसको नीति उसको नेतृत्व हुन्छ, अब पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मै हुँ, माधव नेपालले समर्थन गरिसकेका छन्, प्रचण्डले पनि गर्छन् भन्ने भाषण पनि वामदेवका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ ।
अहिलेका भन्दा त्यसबेलाका बामदेव झनै खपिनसक्नुका थिए । त्यसकारण उनी हार्नुृको कारण खोज्न भनी विभिन्न समिति बनाइएको थियो । ती प्रतिवेदनले पनि हारको कारण गौतमको आफनै कमजोरुी रहेको देखाएका थिए । उनको आफुलाई चुनावमा प्रधानमन्त्री भनी देखाउनु रहेको वताइएकोछ । त्यो प्रतिवेदनको एउटा अंश ः
‘चुनावी भाषण गर्ने क्रममा उत्तेजित हुने र भोलीदेखिने आफु प्रधानमन्त्री भैहाल्ने तथा ब्रहृमाण्डमै बहुदलीय जनवाद लागू गर्छौं भन्न पछि नपर्ने वामदेवलाई आफ्नै भाषणले पनि डुबाएको पाइएको छ । गौतमले चुनावका क्रममा हरेकलाई अट्याच बाथरुमसहितको पक्की घर र एक घरमा दुई रोजगारी अनि जग्गा सरकारीकरण गरेर घर–घरमा भकारी भरी धान दिने बताएका थिए । वामदेवको यो भाषण यति हावादारी सावित भयो कि मान्छेले वामदेवलाई नचिनेका थिएनन् । २५ वर्षदेखि यहीँबाट राजनीति गरेर पनि केही नगरेको आरोप लागेका वामदेवले प्रधानमन्त्री बनेर यसो गर्छुभन्दा कसैले पत्याएनन् । उल्टै हाम्रो जग्गा सरकारीकरण गर्ने भयो भनेर कांग्रेसले प्रचार गरे । र, उनलाई आफ्नै भाषणले डुबायो ।’
खाली गराउने अभ्यास
यता देखियो पनि त्यस्तै । त्यो निर्वाचनमा पराजित भएको भोलिपल्टै देखि प्रतिनिधिसभामा जितेकाहरुलाई राजीनमादिन लगाएर ठाउखाली पार्ने अभियान सरु भैहाल्यो । त्यसमा बर्दियको क्षेत्रन २ पनि परेको थियो र यो त्यो वर्षको पुसकै कुरा हो । माघ पाmगुनसमम आइपुग्दा बर्दियाबाट उनी इलामसम्मै पुगेका थिए र डेढदर्जन जति सख्यापनि पुगेका थिए तर यो बेलासम्ममसेले छाडन मानेनन । झलनाथ खनाल राष्ट्रपतिभएका थिएभने त्यो ठाउमा जाने तयारी थियो ।
जितेकहरुलाई यस्तो राजीनामा दिएर त्यो ठाउँमा आफुखडाहुने योजना उनले आफुलाई प्रधानमन्त्रीका लागि भनी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । यो पछिल्लो पटक बाहेक उनले आफुलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आफू सबै भन्दा उपयुक्त पात्र भन्दै प्रस्तुत गरि नै रहे । त्यही सन्दर्भमा जितेकाहरुलाई आफनालागि ठाउ छाडिदिने व्यक्ति खोजिनै रहे निरन्तरनै ।
तर जित्नेहरुचाहिँ प्रसन्न थिएनन यसरी ठाउ छाडनु पर्ने कुरामा । बहालवाला प्रधनमन्त्रीले आफुपछिको प्रधानमन्त्री भनी घोषण्ण गरिसकेपछि पनि एउटा सिट छोडन लगाउने कुरा आयो पाल्पाको । नेताले छोडन लाएपनि सम्वन्धितलाईचाहि पीडा हुँदोरहेछ । वामदेवका लागि पाल्पा–१ नछाड्ने रानाको चेतावनी शीर्षकमा छापिएको एउटा समचारले त्यो पीडा व्यक्त गरेको हुनुपर्छ ।समाचारको त्यो अंश –
नेकपा सांसद दलबहादुर रानाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पाल्पा–१ बाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने भन्ने प्रचार गलत भएको बताएका छन् । रानाले आफूलाई राजीनामा गराएर वामदेवलाई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने प्रचार झूठो, भ्रमपूर्ण र पार्टी एकताविरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । सम्बन्धित कसैसँग पनि छलफल र चर्चा नै नभएको विषय ‘वामदेव गौतमलाई पाल्पा क्षेत्र नम्बर–१ बाट चुनाव लडाउने सहमति भएको भन्ने समाचार झूठो, भ्रमपूर्ण र पार्टीको एकताविरोधी षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु,’ रानाले लेखेका छन् ।’
आफनालागि जितेकाहरुले सिट छाडिदिने यो कुरा ०७४ देखि ०७७ समम आइपुग्दा पनि कायम रहेछ । माथिको समाचार गएको बैशाखको हो । तर हिजोसममके अवस्थामा जितेकाले आफनालागि सिट छाडिदिने व्यक्ति गौतमले पाएनन, पाएका व्यक्तिलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै भडकाइदिए ।
पछिल्लो समय जव प्रधनमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले नै एउटा ठाँउ खोजेर त्यो ठाउमा उठनोस भनी प्रस्ताव गर्दा अव आफु एउटा मन्त्रीमात्रै भएर रहने भनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य माग्न थाले । यो ठाउमा गौतमका लागि मन्त्रीमा पनि प्रतिकुलता के छ भने प्रतिनिधिसभाकोनिवाृचनमा पराजित भएको व्यक्ति संसदको त्यो कार्यकालमा मन्त्री हुन पाउँदैन । मन्त्री वा प्रधनमनत्र िहुनका लागि कुनै उपचुनावमा जित्न पर्छ । यता गौतमले भने अव यस्तो उपचुनाव नलडने भनी निर्णय नै गरे ।
बर्दियाबाट हारिसकेपछि यो चरण सम्म आइपुग्दा २२ वटा घटना भैसके छन । यसलाईनै ‘बामदेवका वाइस अवतार’ भनी पर्यवेक्षहरुले नामाकरण गरिदिएका छन । यो अवतारमध्ये एउटा पर्छ उनका लागि सविधान संसोधनको विषयपनि । सुनिदा पत्याउने खालको छैन तर सत्य हो । एकताका उनलार्इ फकाउन सुरीक्षत ठाउँ राष्ट्रियसभामा लाने भइयो र राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनपाउने गरी सवधिानसंशोधन गर्न भनी नेकपाको सचिवालयले कमिटिनै गठन गर्‍यो जसमा बरिष्ठ नेता माधवकुमारदेखि उपनेता सुवास नेवाङसम्म थिए ।
यसले त्यो दलमा बामदेवको राजनीतिक मुल्य बुझाउछ । तर यो मुल्य त्योदलको साझा थिएन । बामदेव त्यता ढल्किएपछि अर्को खेमाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै मानेन । त्यसपछि त्यो कमजो खेमाले राष्ट्रियसभामा लाने, सविधान संशोधन गर्र्ने आदि झण्झट भन्दा जितेका एउटा मान्छेलाइृ राजीनामा दिन लगाएर त्यो ठाउँमा खडागरी जिताएर ल्याएर प्रधनमन्त्री बनाउने भनी प्रस्ताव गर्‍यो ।
यो समयदेखि बामदेव अव उताका खेमाका भए । यी सबै चलिरहदा पत्तो पाउनै गाहारो भयो, बामदेव को हुन, उनले नेतालाई खेलाए कि नेताले उनलाई ? पहिले राष्टियसभा सदस्य बन्ने प्रस्ताव आउँदा आफु त्यस्तो सानोतिनो पदमा जाने मान्छे होइन भने । संविधन संसोधनको शर्त त्यही ठाउँबाट उव्जिएको हो । संविधान संसोधन गर्न अप्ठेरो हुन्छ,, निर्वाचन नै लडौ भनिँदा फेरी त्यही सानोपद माग्न थालियो । यसकाबारे विभिन्न माध्यममा आएका उनका भनाइका केही अंश –
चुनाबै नलडने घोषणा
‘मैले राष्ट्रिय सभामा नजाने मनसाय कहिले पनि व्यक्त गरिनँ । पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था नै मान्दिनँ भनेको ठहर्छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । पार्टीले मर्यादित भाषामा मिलाउँदा ‘सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ भनेर भन्यो । त्यो अनिवार्य लागु गर्ने विषय हो । लागु हुनुपर्छ पनि ।
चार–पाँचदिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीजीले डोल्पाबाट चुनाव लड्नुपर्‍यो भन्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाँदिन भनेर भनेको छु । जसबेला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने भनिएको थियो, त्यतिबेला निर्णय भए म जाने पनि थिएँ । अहिले अनावश्यकरूपमा चर्चा गर्नुको अर्थ छैन । कोरोनाको महामारी छ । जाडो मौसम आउँदैछ । चिसोले मानिस कठ्याङ्ग्रिने अवस्था हुन्छ ।डोल्पाबाट आधा मानिसहरू उँधो झर्न थालिसके । यस्तो अवस्थामा डोल्पामा उपचुनाव हुन सम्भव छैन । डोल्पा मात्र होइन, मेरो कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने मानसिकता पनि छैन । पार्टीको निर्णयले म राष्ट्रियसभामा जान पाइरहेकै छु ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘वामदेव गौतमलाई म पछिको प्रधानमन्त्री बनाउँछु र तपाईंहरूले निर्णय गर्नुस’ भनेर भन्नुभयो । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा । निर्णय त्यसदिन हुन सकेन । त्यसपछि २० गतेको बैठकमा प्रस्ताव नै ल्याउनु भएन । एक किसिमले भन्ने हो भने ‘विथ ड्र’ गर्नुभयो । १७ गतेको छलफल प्रस्तावमै ल्याउनुभएन । प्रस्तावको रूपमा नल्याएपछि ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपर्‍यो नि ।’
बामदेव गौतमले अव चुनावै नलडने भन्ने कुरा स्वइम् एउटा सामाचार हो । खासगरी ०७४ मंसिरको चुनाव पछि हिजोका दिनसम्मका यी करिव तीनवर्षमा मूलचूनावहारे पछिको भोलिपल्टैदेखि उपचुनावकै कुराभएका थिए । तर यतिबेला उनले चुनावै नलडने भनेपछि यो उनको मात्र हो कि नेकपाको अवस्थाको मूल्यांकन हो भन्ने पश्न उठनु स्वाभाविक हो । यी सबैकारणले पनि गौतम यति बेला चर्चित भएका हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय गौतमका बारे मध्यमहरुमा अएका समाचारको पनि अर्थ रहन्छ । रेकर्डका लागि तिनका केही अंश –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार (१५भदौ) को कुराकानीमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न प्रस्ताव गरे । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भएयता गौतमको चर्चा कहिले आफैं र कहिले पार्टीका अरू नेताहरूबाट प्रस्तावित सांसदका रूपमा हुदै आएको छ । गौतमलाई सांसद बनाउनका लागि भएको यो २२ औं पटकको चर्चा हो । त्यसअघि पनि गौतमलाई ओलीले सोही प्रस्ताव गरेका थिए तर गौतमबाट जवाफ पाइसकेका थिएनन ।  सोमबार भने गौतमले स्पष्टै रूपमा अहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने सम्भावना नरहेकाले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदसस्य बनाउने फागुन १४ को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरे ।
‘केपीजीबाट सोमबार र दुई दिनअघि पनि प्रतिनिधिसभामा डोल्पाबाट चुनाव उठ्न प्रस्ताव आएको थियो, मैले स्वीकार गरिनँ, कोरोनाकालभरि चुनाव हुँदैन, कोरोना सकिने बेलामा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ . त्यसपछि आमचुनाव हुन्छ । किन जान पर्‍यो ? मन्त्री बनाउनु हन्छ, म एकदम राम्रोसँग तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउँछु । बनाउनुहुन्न भने पनि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो भूमिकामा रहन्छु भनेको छु ।’
दुवै खेमाका प्रधनमन्त्री हाततालाग्यो शून्य
पछिल्लो समयको यतिबेला फागुन १४ र बैशाख १७ नेकपामा अत्यधिक चर्चामा आएका मिति हुन । यी दुइमितिमा भएका कुरा अनुसार भएका भए बामदेव यतिबेलासमम दुइपटक प्रभधनमन्त्री भैसकेका हुने थिए । फागुन १४ को यो दिनबामदेवलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने र संविधान संसोधन गरेर त्यस्तो सदस्य पनि प्रधनमन्त्री बन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको दिन हो यो । यसको नेतृत्व एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए ।
रिपोर्ट भए अनुसर त्यसपछि गौतमले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुने कुरा छोडेर राष्ट्रिय सभा सदस्य कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्नेबारेमा लागे । त्यसपछि उनलाई कास्की २ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव पनि गरियो तर गौतमले हारको आकलन गर्दै उपचुनाव नलड्ने घोषणा गरे । त्यसपछि बसेको सचिवालयले संविधान संशोधनका लागि भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई खुसी पार्न गरिएको थियो भन्ने प्रष्टै छ ।
वैशाख १७ गौतमलाइ बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीबाटै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरको दिन हो । बैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको घटनाले नेकपा विभाजनको संघारमा पुग्यो त्यही सन्दर्भमा बैशाख १७ मा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालसहितका अधिकतर सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागको सन्दर्भमा जवाफ दिन ओलीले आफुपछिको प्रधानमन्त्री गौतम हुनुपर्ने भनी पस्ताव राखे ।
यसले के भयो भने ओलीले राजीनामा दिननपर्ने भयो कारण थियो उनका पक्षमा बहुमत पुग्नु । बामदेब पहिले प्रचण्ड खेमामा थिए । प्रधानमन्त्रीबाटै पधानमन्त्रीको प्रस्ताव आाएपछि उनी यतापल्टिनुपनि स्वाभाविक थियो होला । त्यसकारण बामदेव फागुन १४ मा प्रचण्ड खेमाका प्रधानमन्त्री भए र बैशाख १७ मा ओली खेमाका प्रधानमन्त्री । तर यो भदौ मध्यसम्म आइपुग्दा यता बामदेव भने मन्त्री पनि नहुनेभए ।
प्रकाशित मिति : भाद्र २१, २०७७ आईतबार ५ : ०८ बजे